🥇 ▷ Fasalada cusub ee 'Red Dead Online' ayaa hada diyaar ah ✅
Fasalada cusub ee ‘Red Dead Online’ ayaa hada diyaar ah
Cusboonaysiinta Casriga ah ee ‘Red Dead Online Fursader Pursuits’ waa halkan waana tanina waxay noqon kartaa balastii ugu weyneyd ee Red Red Redemption 2 ay ilaa maanta hesho. Qaabka ciyaarta ciyaarta onlaynka ahi wuxuu ku darayaa saddex fasallo oo cusub iyo sidoo kale laba qaab oo loo maro baasaska dagaalka iyo liis dheer oo ah hagaajinta ciyaarta ciyaarta.
Qaybta ugu wanaagsan ee tani waa in ku dhawaad ​​dhammaan waxyaabaha cusubi ay bilaash yihiin, rukhsadaha lagu bilaabayo qabashada shaqooyinka fasalka cusub waxay ku kici doonaan 15 baararka dahabka ah laakiin sidoo kale waxaa jiri doona habab loogu heli karo lacag la’aan, si la mid ah ayaa lagu sameeyaa kaararka dagaalka ama Outlaw Pass taas oo dhici doonta. Qiimee 30 baararka dahabka ah laakiin wuxuu kugu abaal marin doonaa 30 kale marka aad la kulanto dhammaan caqabadaha ka gudbaya.
Waxyaabaha ku jira qof walba
Taasi waxay dhahday, hadda ciyaartoy badani waa inay heystaan ​​baararka dahabka ah oo ku filan oo ay ku bixiyaan kaarka dagaalka ama ugu yaraan laysanka ganacsade, ugaarsade fadliga ama aruuriyaha. Marka casriyeynta waxay soo bandhigi doontaa qadar aad u weyn oo ka kooban ku dhawaad ​​hal sano ka dib markii la siidaayay Red Dead Redemption 2 oo dhamaan ciyaartoydu heli karaan.
Tan waxaan ku dari karnaa in Outlaw Pass ay leedahay qaab ay dhamaan ciyaartooydu si toos ah ay u heli doonaan marka ay ciyaarayaan inta u dhexeysa Sebtember 10 iyo Oktoobar 18. Abaalmarinadan qaar ka mid ah waxaa ka mid ah dharka, hubka, koofiyadaha, kaararka, tonics, lacag caddaan ah iyo waxyaabo kaloo badan. Farqiga u dhexeeya mid iyo dahab wuxuu deganaan doonaa tayada abaalmarinta.
Dhanka kale, casharrada cusub waxay kuu ogolaan doonaan inaad khibrad ciyaarta ku soo aragto qaab ka duwan, waxaad ku bilaabi doontaa sidii rookie laakiin waad ku sii gudbi kartaa safka, laga bilaabo 1 ilaa 20. Marka dambe waxaad noqon doontaa shaqaale la kala sooco oo waxaad heli doontaa galaangal si hawlgallo dheeri ah iyo dhacdooyin loogu noqdo xubin guuleed guul leh
Si aad u hesho rukhsada ugaarsiga waa inaad ka iibsataa mid ugaadhsade kale fadaraalka, qaasatan midka Rhodes. Dhinac ahaan, haddii aad ku biirto naadiga xubin ka ah Rockstar oo aad ku xirto koontadaada Twitch Prime, waxaad ku heli doontaa liisankan lacag la’aan ciyaarta. Shatiga ganacsadaha waxaa lagu helaa isagoo iibsanaya miiska hiliblaha bakhaarka, in kasta oo adeegsadayaasha PlayStation 4 ay bilaash ku heli karaan.
Ugu dambeyntii, laysanka aruuriyaha ayaa la iibsan karaa markii laga iibsado Madam Nazar ama helitaanka 54 GTA Online kaararka aruurinta, tan waa inaad ku xirataa koontadaada Rockstar Shabakadda PlayStation ama Xbox Live.
Red Dead Online ayaa hadda heshay casriyeyn aad u qurux badan isla markaana Rockstar waxay ballanqaadeysaa balamo dheeri ah dhowaan. Waxaan uga tagaynaa xayeysiiska Frontier Pursuits hoosta.